Kaddib guuldarrooyinkii isxigay ee Premier League ay la kulantay Gunners wax ka ogow xaqiiqooyin kooban oo ku saabsan kooxda Arsenal – Gool FM
Kaddib guuldarrooyinkii isxigay ee Premier League ay la kulantay Gunners wax ka ogow xaqiiqooyin kooban oo ku saabsan kooxda Arsenal
(London) 14 Dis 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa xalay guuldarro 1-0 kala kulantay Burnley oo ay ku soo dhoweysay garoonkeeda kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Granit Xhaka ayaa 58’daqiiqo loo taagay kaarka cas markii uu cunaha qabtay mid ka mid ah xiddigaha Burnley.
Yeelkeede, dhammaadkii ciyaarta 73’daqiiqo kabtanka Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa iska dhaliyey goolka looga adkaaday kooxdiisa, kaddib markii uu shabaqa kooxdiisa ku leexiyey kubbad gees laad ahayd oo la soo karoosay.
Haddaba kaddib guuldarrooyinka isxiga ee horyaalka Premier League ay la kulmayso Gunners, waxaan halkaan hoose idin kugu soo gudbinaynaa xaqiiqooyin kooban oo ku saabsan kooxda Arsenal:-
▪︎ Shantii kulan ee ugu dambeysay oo ay ciyaartay horyaalka Premier League kooxda Gunners waa guul la’aan oo maba adkaan.
▪︎ Labo kulan oo kaliya ayay adkaatay ama guuleysatay Arsenal 10-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Premier League.
▪︎ Labo gool kaliya ayay dhalisay siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay dheeshay horyaalka Premier League.
▪︎ Hadda Arsenal waxa ay 12 dhibcood ka dambeysaa Kooxda hoggaanka u haysa horyaalka Premier League ee Tottenham.
▪︎ Waxaana ay Kooxda Arsenal fadhisaa iminka kaalinta 15-aad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, waxaana ay shan dhibcood oo kaliya ka sarreeyaan kaalimaha loogu laabto heerka labaad ee Ingiriiska.
Kooxda ugu fiican ee ay wajihi karto iyo Kooxda ugu xun oo ay ku aadi karto Chelsea wareegga 16-ka Champions League oo la sii saadaaliyey
Isku aadka wareegga 32-ka Kooxood ee Europa League oo maanta la sameynayo... (Arsenal iyo Man United oo ogaan doona kooxaha ay ku beegmeen)